Corazones - Spanisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: corazones (Spanisch - Burmesisch)
Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones
ငါတို့၌သင်တို့သည် ကျဉ်းမြောင်းသည် မဟုတ်။ ကိုယ်မေတ္တာ ကရုဏာ၌သာ ကျဉ်းမြောင်းကြ၏။
Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él
ထိုစကားကိုကြားလျှင် နှလုံးကွဲပြတ်မတတ် ဖြစ်၍၊ သတေဖန်၌ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းကို ပြုကြလေ၏။
ထိုကြောင့် သင်တို့သည် အဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကို ရှေ့မဆွက မဆင်ခြင်ခြင်းငှါ သတိထား ကြလော့။
En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de él
ထိုသို့ချစ်လျှင်၊ ကိုယ်တိုင်သမ္မာတရားနှင့် ဆိုင်သည်ကို ကိုယ်သိရ၍၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကို သက်သာစေကြလိမ့်မည်။
¡El Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo
ဘုရားသခင်ကို ချစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သခင်ဘုရားသည် သင်တို့စိတ်နှလုံးကို ပြင်ဆင်တော်မူပါစေသော။
Hizo proezas con su brazo; esparcióalos soberbios en el pensamiento de sus corazones
လက်ရုံးတော်အားဖြင့် တန်ခိုးကိုပြတော်မူပြီ။ မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကို ကွဲလွင့်စေတော်မူပြီ။
para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará tu misma alma
ထိုမှတပါး သန်လျက်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးကို ခွင်းလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆို၏။
pues aún no habían comprendido lo de los panes; más bien, sus corazones estaban endurecidos
အကြောင်းမူကား၊ သူတို့စိတ်နှလုံး မိုက်သည်ဖြစ်၍ မုန့်၌ပြသောတန်ခိုးတော်ကို ပမာဏမပြုကြ။
သင်တို့သည် ငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ ရေးထားသောစာ၊ လူအပေါင်းတို့သိ၍ ဘတ်တတ်သောငါတို့ စာပင်ဖြစ်ကြသတည်း။
ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏စိတ်ကို သိမြင်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့်ငြူစူသောစိတ် ရှိကြသနည်း။
Tened también vosotros paciencia; afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca
သင်တို့သည်လည်း သည်းခံလျက်စောင့် နေကြလော့။ ကိုယ်စိတ် နှလုံးကိုမြဲမြံစေကြလော့။ သခင်ဘုရား ကြွလာတော်မူသောအချိန်ရောက်လုနီးပြီ။
El Seol y el Abadón están delante de Jehovah; ¡cuánto más los corazones de los hombres
မရဏာနိုင်ငံနှင့်အဗဒ္ဒုန်နိုင်ငံသည် ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ ထင်ရှား၏။ ထိုမျှမက၊ လူသားတို့၏ နှလုံးသည် သာ၍ထင်ရှား၏။
ConozcoaEstados Unidos como un país con un gran corazón.
အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ စိတ်နှလုံးထား သဘောထားကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ ကျွန်မ သိပါသည်။
Te lo vuelvoaenviar,aél que es mi propio corazón
ထိုသူကို သင့်ထံသို့ ငါပြန်စေသည်ဖြစ်၍၊ သူ့ကို ငါ့ရင်သွေးကဲ့သို့မှတ်လျက် လက်ခံလော့။
GraciasaDios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros
ထိုသို့သင်တို့၏ အကျိုးကိုပြုစုချင်သော စေတနာစိတ်ကို ဘုရားသခင်သည် တိတုအားလည်း ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပေ၏။
Pues para corresponder del mismo modo, comoahijos os hablo: ¡Abrid vosotros también vuestro corazón
ငါတို့ကျေးဇူးကိုဆပ်ခြင်းအလို့ငှါ ကျယ်ဝန်းသောစိတ် ရှိကြလော့။ ထိုသို့ဆိုသော် ကိုယ်သားတို့ကို ဆိုသကဲ့သို့ ငါဆို၏။
temeperatur optimering (Dänisch>Englisch)vízumok (Ungarisch>Englisch)noi veniamo davantiate (Italienisch>Englisch)noverint universi (Latein>Spanisch)tawag sa kabit na lalake (Tagalog>Englisch)afdelings (Afrikaans>Esperanto)tagalog kapampangan translator (Englisch>Tagalog)asher (Englisch>Bulgarisch)voglio (Italienisch>Maori)stocked up (Englisch>Tagalog)odosielanie (Slowakisch>Slowenisch)paterte europea (Italienisch>Burmesisch)apni bua ki ladki ko kya kahte hai (Hindi>Englisch)Пирол (Bulgarisch>Französisch)thoppai (Tamilisch>Englisch)sleep tight (Englisch>Malaysisch)lagusan (Tagalog>Englisch)aku mau pakai baju (Indonesisch>Englisch)sunil my brother (Hindi>Englisch)listen and answer (Englisch>Portugiesisch)ice lemonade (Englisch>Französisch)infizierte (Deutsch>Französisch)indsatshærdet (Dänisch>Englisch)recondiționarea (Rumänisch>Englisch)hubiereis ungido (Spanisch>Chinesisch (Vereinfacht))